अस्पतालको शय्यामा बेखर्ची पाँचथरका शुक्रबहादुर￼ « Mechipost.com
अस्पतालको शय्यामा बेखर्ची पाँचथरका शुक्रबहादुर￼
प्रकाशित मिति: ५ बैशाख २०७९, सोमबार ००:४०
काठमाडौं । चाबहिलको दीर्घायु गुरु अस्पताल, बेड नम्बर २१४ । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–५ का शुक्रबहादुर मगर तीन महिनादेखि यो बेडमा बेवारिसे जस्तै बनेका छन् । उनको घर जाने कुनै टुंगो छैन । किनभने उपचार खर्चबापतको पैसा जुटाउन उनको परिवारका सदस्यले सकेका छैनन् ।
उनी हरबखत भित्तामा हेरेर टोलाइरहन्छन् । अरुको सहाराविना हिंड्नु त परको कुरा हल्लिनसमेत सक्दैनन् । दिसा–पिसाब बेडमै गराउनुपर्छ । कमजोर शरीर एकत्रित गरेर पल्टिरहन्छन् । बेडमा पल्टिनुबाहेक शुक्रबहादुरसँग कुनै विकल्प छैन ।
उमेरले ३५ नकटेका उनी रोग र शोकले बुढ्यौलीले छोएका जस्तै देखिन्छन् । घर जान मन छ, उनलाई तर कसरी ? कुनै जवाफ छैन उनीसँग । चाहेर पनि उनी घर जान सक्दैनन् । एकातिर उनलाई अस्पतालको शय्याबाट छुटकरा पाउनु छ भने अर्कातिर घर गएर के गर्ने भन्ने पीर छ । अरुको सहाराविना कसरी बाँच्नु ? यो प्रश्नले तर्साइरहन्छ मगरलाई । ‘अस्पतालबाट घर जान पाए हुन्थ्यो, यहाँ बस्दाबस्दा ऐठन भइसक्यो । मरे पनि घरमै मर्थें,’ शुक्रबहादुर सुनाउँछन् ।
पहिलेजस्तो धेरै बोल्न पनि सक्दैनन् उनी । बोल्दा बेलाबेलामा सास नै रोकिएको जस्तो हुन्छ । ओठ–मुख सुक्छ । शुक्रबहादुर आफ्नो पीडा न कसैलाई सुनाउन सक्छन् न अरुले बुझ्न । उनी आफ्नै भाग्यलाई धिक्कार्छन्, कस्तो दिनमा घरबाट हिंडेछु भनेर । ‘यसरी बेवारिसे भई बाँच्नुभन्दा मरेको भए हुन्थ्यो, किन मेरो प्राण गएन,’ उनी निराश भावमा भन्छन् ।
‘किन मरिनँ होला म ? किन मलाई यति महंगो अस्पताल ल्याए होलान् । बेलाबेला सास रोकिएला जस्तो हुन्छ ?’ भावुक प्रश्न गर्छन् शुक्रबहादुर ।
घरमा उनकी बुढी आमाले छोराको बाटो कुरिरहेकी छन् । उनको एक मात्रै छोरा हुन् शुक्रबहादुर । जसलाई उनी बुढ्यौलीको काँध मान्छिन् । ‘पहिले त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन खै, कुन दैव लाग्यो मेरो बुढेसकालको सहारा थला पर्‍यो,’ पाँचथर घरमा रहेकी शुक्रबहादुरकी आमा ज्योति मगर भन्छिन् ।
छोरालाई हेर्न काठमाडौं आउन मन छ उनलाई । तर न खर्च छ, न त घर हेरिदिने मान्छे नै । ६५ वर्ष उमेरकी आमासँग छोरा आउने बाटो हेर्नुको विकल्प छैन । चैत ३० गते बिहानसम्म अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रकम ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर त्यत्रो पैसा कसरी तिर्ने कुनै ठेगान छैन ।
शुक्रबहादुरलाई पनि छिट्टै घर जान मन छ । आमालाई म आइसकें, ठीक भइसकें भन्न मन छ । उता आमालाई पनि छोरालाई बेस्सरी अँगालो हालेर मुसार्नु छ, मनको वह पोख्नुछ अनि मनको पीडा भुलाउनु छ । तर विडम्बना यी सबै कुरा उनीहरुका लागि असम्भव जस्तै भएका छन् ।
खोटाङमा गत माघ ६ गते उच्च रक्तचापका कारण अकस्मात् बेहोस भएपछि शुक्रबहादुरलाई उनका साथीहरुले काठमाडौंको चाबहिलमा रहेको दीर्घायु गुरु अस्पतालमा लिएर आएका थिए । टाउकोको नसामा समस्या देखिएपछि माघ ६ गते उनको टाउकोको शल्यक्रिया गरियो ।
शल्यक्रियापछि १३ दिन कोभिड आईसीयूमा राखियो । त्यसपछि अहिले उनी जनरल वार्डमा छन् । खोटाङमा बेहोस भएका उनलाई त्यसपछिको अवस्थाबारे केही थाहा छैन । जनरल वार्डमा सारिएपछि शुक्रबहादुर अलि–अलि विगतका कुरा सम्झन थालेका छन् ।
घरको नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण उनले अस्पतालको पैसा तिर्न सकेका छैनन् । टाउकोको शल्यक्रिया गर्न गाउँघरबाट केही सहयोग उठाएर अस्पताललाई बुझाएका छन् ।
शुक्रबहादुरका भतिज आयुष मगरका अनुसार आर्थिक अभावका कारण गाउँबाट आर्थिक सहयोग संकलन गरी ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ अस्पताललाई बुझाए पनि बाँकी पैसा तिर्न नसक्दा शुक्रबहादुरलाई घर लैजान पाएका छैनन् ।
चैत ३० गते बिहानसम्म अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रकम ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर त्यत्रो पैसा कसरी तिर्ने कुनै ठेगान छैन । शुक्रबहादुरलाई पैसा तिर्न बाँकी धेरै छ भन्ने मात्रै थाहा छ, तर कति भन्ने थाहा छैन ।
अस्पताललाई तिर्ने पैसा नभएपछि…
शुक्रबहादुर माघ २ गते पाँचथरबाट काठमाडौं आएका थिए । खाडीमा तीन–चार वर्ष पसिना बगाएर आमालाई खुसी दिने र घरजम गर्ने उनको सपना थियो । उनकी बहिनी निर्मला मगरका अनुसार काठमाडौंमा दुई दिन भिसाबारे बुझेर शुक्रबहादुर मामाकी छोरीको घर खोटाङ गएका थिए । खोटाङमा मामाकी छोरीले विवाहका लागि केटी हेरेकी थिइन् । उनैलाई हेर्न उनी साथीसँग त्यहाँ पुगेका थिए ।
खोटाङमा केटीको घर पुगेर विवाहको कुरा छिनिसकिएको थियो । एकपटक विदेश गएर पैसा कमाएर दुलही भित्र्याउने उनको सपना थियो । तर सपनाले पूर्णता नपाउँदै जिन्दगीमा उथलपुथल आयो । उनी मृत्युशय्यामा थलिए । पैसा नभएका कारण अस्पतालमै बन्धक बनेर बस्नुप¥यो ।
‘म बुढीले कहाँबाट ल्याउँ त्यत्रो लाखौं पैसा ? न कमाइ छ, न त बेच्ने घरजग्गा नै,’ भावुक हुँदै आमा ज्योतिले भनिन् । शुक्रबहादुरको पाँचथरको गाउँमा सानो घर र रुखो जमिन छ । उब्जनी नहुने त्यो जग्गा कसैले किन्न पनि मान्दैनन् ।
टाउकोको शल्यक्रिया गरेपछि स्वास्थ्यमा सुधार देखिएपछि अस्पतालले शुक्रबहादुरलाई फागुन १ गते डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरेको थियो । तर अस्पताललाई तिर्ने पैसा नभएपछि उनी घर जान पाएका छैनन् ।
हरेक दिन बिहानीको सुस्केराले उनको जिन्दगीमा कोलाहल मच्चाउन थाल्छ । आमाले गाउँमा बनिबुतो गरेर गुजारा चलाउँथिन् भने शुक्रबहादुर कहिले ज्याला मजदुरी गर्थे त कहिले खाडी जान्थे । उनी एकपटक मलेसिया बसेर फर्किएका हुन् ।
‘मलाई भाग्यले ठग्यो । भाग्यले गरिब र निरीह साबित गरिदियो । मलाई कहींको राखेन,’ शुक्रबहादुरले सुनाए । अहिले उनको बायाँ हात र बायाँ खुट्टा चल्दैन । उनका हात–खुट्टामा प्यारालाइसिस भएको छ ।
उच्च रक्तचापका बिरामी अकस्मात बेहोस हुँदा शरीरका अंग नचल्ने अर्थात् प्यारालाइज हुने गर्छन् । शुक्रबहादुरको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको डा. राजीव झा बताउँछन् । ‘उच्च रक्तचापका कारण बेहोस हुँदा ब्रेनमा समस्या हुन गई शरीरका अंगहरु प्यारालाइज हुन्छन्, जुन निको हुने सम्भावना न्यून हुन्छ,’ डा. झा भन्छन् । उनका अनुसार प्यारालाइसिस भएका अंग निको हुने सम्भावना १० प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।
शुक्रबहादुरको हात–खुट्टा प्यारालाइज भएपछि उनलाई अस्पतालले थेरापी गराइरहेको छ । अस्पतालमा बुधबारसम्म ८ लाख ८४ हजार ३ सय रुपैयाँको बिल उठिसकेको छ । जसमध्ये ३ लाख २४ हजार जम्मा भइसकेको छ भने ५ लाख ६० हजार ३ सय बाँकी छ ।
अस्पतालको खर्च तिर्न नसक्दा बन्धक बनेका उनको खर्च झनै बढिरहेको छ । ‘एकातिर पहिल्यै तिर्नुपर्ने पैसा तिर्न सकेका छैनौं, अर्कोतिर अस्पताल बसाइ लम्बिएर खर्च बढ्दै गएको छ,’ शुक्रबहादुरकी बहिनी निर्मलाले सुनाइन् ।
अस्पतालको पीडादायी बसाइ, गरिबीसँगै ऋणले थलिएको जिन्दगी र टुटेका सपनाले शुक्रबहादुरलाई बेलाबेलामा तर्सारहन्छन् । काका शुक्रबहादुरको अनुहार हेर्दै भतिजा आयुष भन्छन्, ‘पैसाविनाको जिन्दगी के जिन्दगी । गरिबले पैसा नभए उपचार गर्न नपाउने, उपचार पाए अस्पतालमै बन्धकजस्तो भएर बस्नुपर्ने ।’
शुक्रबहादुरको उपचारमा भएको खर्च जुटाउन फालेलुङ समाज, नेपालले काठमाडौंमा तथा फिदिमका अधिकारकर्मी मंगल बेघाले फिदिममा सहयोग सङ्कलन अभियान चलाइरहेका छन् । शुक्रबहादुरको उपचारमा भएको खर्च जुटाउनका लागि निम्न खाता नम्बरमा रकम जम्मा गर्न सकिने अभियन्ताहरुले जनाएका छन् ।
सहयाेगीहरुका लागि बैंक खाता विवरण
1. NAME:- MANGAL BAHADUR BEGHA
Account No. :- 0380035365500015
Bank :- Machhapuchchhre Bank Ltd, Phidim Branch
Mobile No. :- 9862772744
2. Account Name : Pujan Jabegu
Account No. : N307010000358
Bank : Global IME Bank Ltd
Mobile No. : 9862774406
(समाचार सामग्री अनलाइनखवरबाट साभार)
कार दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते
फिदिम । पाँचथरमा कार दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते
विरामी बोकेको बोलेरो दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु
फिदिम । पाँचथरबाट विरामी बोकेर झापातर्फ जाँदै गरेको बोलेरो इलाममा दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु
गोलियाले किचेर एक युवकको मृत्यु
फिदिम । पाँचथरमा रुखको गोलियाले किचेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । सल्लाको गोलिया पल्टाउने
याङवरकको बजेट ४८ करोड ९० लाख￼
नेत्र कोइराला, थर्पु पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट रु. ४८ करोड ९०